Isevisi Yamakhasimende Engalungile Iyalimaza I-ROI Yakho Yokumaketha | Martech Zone
NgoMgqibelo, Ephreli 9, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
UJitbit, ipulatifomu ledeski losizo, likhiqize le infographic enezibalo ezichaza ngokusobala isithombe umthelela wenkonzo yamakhasimende empofu ebhizinisini. Izinkampani ziyaqhubeka nokuphatha ukuhlinzekwa kwamakhasimende ngendlela engafanele njengoba kwenzeka eminyakeni edlule… lapho amakhasimende ayevame ukukhononda kuphela ebhizinisini noma kumbuthano omncane wabangane. Kepha lokho akulona iqiniso lomhlaba esiphila kuwo manje.
Amakhasimende athukuthele angababulali abathule
Ukuhlinzekwa kwamakhasimende okungalungile kucekela phansi igama lomkhiqizo wakho ku-inthanethi futhi kuthinta ngqo inzuzo yakho yokumaketha kutshalomali. Uma unekhasi lomkhiqizo online eligcwele izibuyekezo ezingezinhle ngaphansi kwalo, abathengi abangaba khona bazohamba. Eqinisweni, izivakashi ezingama-86% ngeke zithenge enkampanini enezibuyekezo ezingezinhle.
Ukuze uthuthukise ukusebenza kwamakhasimende akho ngokweqile, i-JitBit incoma ukuthi izinkampani zithuthukise ukuxhumana phakathi kwabasebenzi bezinsizakalo namakhasimende, zinikeze ukuqeqeshwa okungcono ukugwema abasebenzi abangafaneleki, futhi zinikeze okuhlangenwe nakho okungaguquguquki kuzo zonke iziteshi zesevisi yamakhasimende - ezibandakanya zombili izingcingo, i-imeyili, ingxoxo ebukhoma, izinkundla , chofoza-to-call ukwesekwa kanye nemithombo yezokuxhumana. Bacacisa imininingwane ye- Izindlela Eziyi-11 Zokuhlinzekwa Kwamakhasimende Ezimbi Zishisa Umugqa Wakho Ophansi kokuthunyelwe kwabo:
Ukungafinyeleleki - amabhizinisi adinga ukufinyeleleka futhi aphendule kuzo zonke iziteshi.
Speed - akukho okucasula umthengi njengokulinda usizo.
Ulwazi - abenzeli bezinsizakalo abangakwazi ukusiza bangaphezu kokukhungatheka.
Iziphakamiso - ukuzama ukunqoba le mpi kusunduza amabhizinisi ukuthi alahlekelwe yimpi.
Izithembiso - ukwephula izithembiso kwephula ukwethembana, kanti uhhafu wazo zonke izinkampani wephula izethembiso.
amarekhodi - izingcingo eziphindaphindwayo nokuchaza inkinga kaninginingi isikhathi ngasinye lapho kushayela amakinati amakhasimende.
Ukwenza okuthandwa nguwe - Ukungazi ukuthi ngubani ikhasimende lakho, inani lalo, ubuchwepheshe babo, kanye nokulindela kwabo kushiya izinkampani ngemuva.
Ukulalela - ukuthi ukuphinda inkinga kaninginingi akudingekile futhi kwehlisa amazinga wokwaneliseka.
Ukulandela - uma uthi uzolandelela, landela.
Abasebenzi Abangahloniphi - noma ngabe usuku olubi kangakanani abasebenzi bakho banalo, asikho isizathu sokukhipha lokho kukhasimende elilandelayo.
Gijimani - ukudluliswa nokubambezeleka ngaphandle kwesinqumo kuyinto embi kakhulu ongayenza kumakhasimende.
Isisekelo salesi infographic? Ngo-2020, isipiliyoni samakhasimende izodlula intengo nomkhiqizo njengoba ukhiye isihlukanisi somkhiqizo. Imikhiqizo eminingi isivele ikhona, ngombono wami. Amabhizinisi afunda ukuthi amakhasimende angenelisekile kuyaqabukela abuye, iningi aliphindi lisebenzise le nkampani futhi. Okuhlanganisa nokuthi iqiniso lokuthi amakhasimende angenelisekile angabelana kalula ngokukhungatheka kwawo ku-inthanethi, futhi ibhizinisi lakho libheke enkingeni uma ungaphenduli futhi ulungisa izinkinga ezikhulunywa ngomlomo. Izinkampani eziningi zithatha ukusekelwa kwamakhasimende njengobubi obudingekayo lapho kufanele ukuthi batshale imali kuwo njengomehluko kulabo abancintisana nabo.
Tags: isevisi embi yamakhasimendeisipiliyoni samakhasimendeInsizakalo yekhasimendeamakhasimende roiizibalo zamakhasimendeusizoinfographicjitbitukubuyekezwa okungalungileinsizakalo yamakhasimende empofuIzibuyekezoRIO